Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Halkeen Ka Heli Karaa Tuubada Jikada Ugu Fiican?
2020 / 10 / 27 QoondayntaTilmaamaha qasabada 847 0
Sababta ay tan u tahay su'aasha muhiimka ahi waxay tahay xaqiiqda ah, in maalmahan jikada wax laga beddelayo. Gabi ahaanba ma jirto sabab aad u isticmaasho dhammaan noocyada saxanka iyo qasabadaha markii aad si fudud u madoobi karto tubada jikada iyada oo xulashada pulldown. In yar oo ka mid ah cilmi-baarista khadka tooska ah ayaa ku tusi doonta in waxyaalahan aysan xitaa qaali ahayn hadda.
Raadi Qasabad U dhigma Jikadaada
Fikrad aad u fiican ayaa kuu noqon doonta inaad raadiso Matte madow hoos u soo jiido qasabadda jikada. Qasabada noocaas ah waxay hubaal ka dhignaan doontaa inta ka hartay jikadaada. Maaddooyinka Matte-ka ayaa aad uga qurux badan uguna muhiimsan, aad ayey uga sahlan yihiin in la nadiifiyo. Dabcan, adoo haysta ikhtiyaarka pulldown waad nadiifin kartaa wax kasta oo ku jira saxanka iyo dusha sare oo dhan hareeraha saxanka iyada oo aan lahayn dadaal badan.
Maaddaama ay tahay haweeney guri-doon ah oo dooneysa inay nolosheeda u fududeyso sida ugu macquulsan ee haysashada qasabadda jikada oo kale waxay hubaal tahay inay noqonayso mudnaanta koowaad. Dabcan, adduunka internetka ayaa hubaal awoodi doona inuu kaa caawiyo inaad hesho sida ugu fiican. Waxaa jira tiro aan la koobi karayn oo ah bogag internet oo kala duwan oo halkaas kaa caawin doona noocyada aaladahaas.
Raadi Qalabka ugu Fiican jikadaada
Intaad daalacaneysid, waxaan kuu balan qaadi karnaa inaad awoodi doonto inaad hesho noocyo kala duwan, moodooyin kala duwan iyo dabcan, midabbo kala duwan Xitaa waxaa jiri kara kala duwanaansho yar markay tahay nidaamka pulldown. Arrin kasta ha noqotee, waxaad had iyo jeer dooneysaa inaad doorato midka leh dib u eegista ugu fiican iyo haddii ay suurtagal tahay qiimaha ugu fiican. Dabcan, kan ugu fiican kuwa ugu fiican badanaa waxoogaa qaali ah laakiin taasi waa caadi.
Xusuusnow taas, gabi ahaanba ma jirto sabab aad noloshaada ugu adkaato adoo haysta jiko duug ah oo aan kuu oggolaan doonin inaad si fudud ugu gudubto hawl maalmeedkaaga. Ma dooneysaa cusub oo asal ahaan karsan doonta cuntada adigoon caawimaad kaa helin haba yaraatee? Waa inaad heshaa Ma dooneysaa qasabad aad pulldown ku nadiifin karto wax badan oo dusha sare ah iyada oo aan dadaal badan la gelin? Waa inaad sidoo kale heshaa midkaas. Hesho wax kasta oo aad rabto maxaa yeelay ma jiraan wax ka muhiimsan inaad ku raaxeysato gurigaaga, qol kasta oo aad ku jirto.
Hore:: Matte Black jiido Down Jikada qasabad Next: Jiko Casri ah adiga ayaa kuu dhuuqeysa